HomeWararka MaantaArsenal vs Chelsea: Kulanka Sabtida, Sida Loo Doodo Ciyaartoyga Iyo Koox Laga Sameeyey Labada Kooxood
Taariikhdooda casriga ah waxa ku xardhan guulo ay gaadho Chelsea iyo Arsenal oo kaadh cas qiil ka dhigata. Laakiin isbeddelo badan ayaa ku dhacay Chelsea xili ciyaareedkan, mana joogo ninkii ku faani jiray inuu mar walba ka badiyo Arsenal iyo tababare Wenger ee Jose Mourinho.
Waxa markan is haleelaya Wenger iyo Antonio Conte, su’aasha taaganna waxay tahay labadooda midkee wanaagsan? Koox ahaan keebaa wanaagsan.
Shabakadda ciyaaraha ee Cadalool waxay halkan idiin ku soo bandhigaysaa koox laga sameeyey labada kooxood oo isku dhaf ah, taas oo boos walba ninka ugu fiican loo doortay.
Goolhaye – Petr Cech (Arsenal): Tan iyo markii uu ka tegay Chelsea waxa uu shabaqaiisa ka ilaaliyey kubbado badan, xili ciyaareedkii horena waxa uu u horseeday kooxdiisa inay gasho kaalinta labaad ee horyaalka Premier League. Waxa uu ka mudan yahay Thibaut Courtois oo Chelsea ay ka dooratay inay haysato, isagana Arsenal ka iibiso.
Koscielny (Arsenal): Difaaca dhexe ee ugu fiican Arsena, horumar badanna sameeyey sannadihii u dambeeyey. Xulka France ayuu udub dhexaad u ahaa ciyaarihii Euro 2016, waxaana u dheerayd in Arsenal uu aamin ka dhigo in goolal badan uu ka difaaci doono marka uu garoonka ku jiro. Waxa uu ka wanaagsan yahay ciyaartoyga Chelsea uga ciyaara booskaas ee Cahil, Luiz iyo kuwo kale oo kooxdiisa Arsenal jooga.
Terry: Ruug caddaa in badan ku soo jiray xirfadda, udub dhexaad haysta lug iyo madax aamin ah oo goolhayeyaashu ku nastaan.
Bellerin (Arsenal): Difaaca midig isagaa ugu wanaagsan labada kooxood marka la isku daro, orodkiisa, soo noqoshada iyo sida uu ciyaarta uga qayb-qaato inta ay ciyaartu socoto ayaa lama taabtaan ka dhigay.
Azpilicueta (Chelsea): Baasha midixda ayaa loo doortay inuu kooxdan samayska ah u istaago. Isku-darka labadan kooxood, isagaa ugu fiican dhinaca bidix.
Kante (Chelsea): Udub-dhexaad nasiya difaaca, caqabadna ku ah ciyaartoyga ka soo horjeeda. Waa madaale aan mar qudha nasan, ayna u dheer tahay in uu hortaagan yahay ciyaartoy kasta oo kubadda dhinaca goolkiisa ula soo dhaqaaqa. Chelsea nasiib badan ayey lahayd markii ay heshay.
Cazorla (Arsenal): xiddigan reer Spain waxa uu ka mid yahay kubbad-habeeyeyaasha Arsenal. Waxa uu qaabeeyaa ciyaarta kooxda, marka ay ku adkaatona goolka nefiska wuu u dhaliyaa.
Sanchez (Arsenal): Intii uu ku biiray Arsenal ee uu ka soo wareegay Barcelona waxa uu rajo badan geliyey Wenger oo ku hamiya inuu u qaadayo horyaalka. Orodkiisa, kubbad-qaabayntiisa, dhalintiisa iyo farsamadiisa kala duwan waxay ka dhigtay inuu ka mid noqdo mid ka mid ah ciyaartoyga dunida ugu wanaagsan. Marka la tirinayo ciyaartoyga haldoorka u ah kubadda dunida, kuwa ugu horreeya ayaa uu ku jiraa.
Ozil (Arsenal): Hal-abuurka hibada ah, jidhkiisa jilicdasan ee sida sahlan marba uu dhinac ugu jeediyo si sahlan. Marka ay kubaddu lugtiisa ku jirto waxa la hubaa in halkii uu ugu talo-galay uu geynayo, ciyaartoyga ka soo horjeedana waxba isagama tiriyo. Goolasha ay kooxdiisu dhaliso, in ka badan kala badh ayaa lugtiisa ka baxa oo uu ka shaqeeyaa.
Fabregas (Chelsea): Sannadkan ma aha mid u wanaagsan, ciyaarihii kooxdiisana kaydka ayuu ku dhamaystay marka laga reebo kulankii Leicester City ee League cup oo uu laba gool oo guul u horseeday uu u dhaliyey, laakiin dhinaca kale, hibadiisa ciyaareed iyo farsamadiisa indho-sarcaadka ah lama qarin karo. Wakhtigiisii Arsenal waxa uu ahaa rukun tiirarka kooxdu ku taagan tahay ka mid ah.
Diego Costa (Chelsea): Halgamaa dagaal xiradeed ku jir, xili ciyaareedkana aan ka bixinn garoomada isagoo aan gool dhalinin. Horyaalka Ingiriiska kooxuhu si adag ayey ugu diyaar garoobaan sidii ay isaga kaligii isaga xidhi lahaayeen.
Kooxda oo dhamaystiran:
Goolhaye: Petr Cech
Difaac: Koscielny, Terry, Azpilicueta & Bellerin
Dhexda: Kante, Cazorla, Ozil, Sanchez & Fabregas.
Weerarka: Diego Costa
Celtic Waxay ka baxsatay Partick Thistle – Ciyaartoodii furitaanka